Dowlada Kenya oo kala xaajoonaysa maamulka Jubba dib u soo celinta qaxootiga Soomaalida – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
19th August 2014 MAREEG Af Soomaali 0
Dowlada Kenya ayaa waxa ay ka raadinaysaa beesha caalamka lacag gaareysa $100 million (Sh8.8bn) taasoo ay dib ugu celinayso qaxooti Soomaali ah oo ku nool dalkeeda.
Kulan ka dhacaya magaalada Addis Ababa Arbacada ayaa xukuumada Kenya waxa ay ka rajaynaysaa in beesha caalamka ay gacan ka geysato sidii qaxootiga Soomaalida ah dib ugu celin lahayd wadankooda.
Dhaqaalaha ay raadineyso xukuumada Kenya ayaa waxaa dib loogu celinayaa nus malyuun qaxooti Soomali ah iyadoo gacan la siinayo qaxootiga marka ay dib ugu laabtaan dalkooda.
Kulankan ayaa waxaa ka qeybgalaya wadamada ay joogaan qaxooti Soomaali ah sida Kenya, Ethiopia, Djibouti, Uganda and Yemen.
Sida ay qoreen qaar ka mid ah wargeysyada dalka Kenya Jimcihii aynu soo dhaafnay ayaa dowlada Soomaaliya waxa ay qaadacday kulankii ugu dambeeyay ee ahaa mid saddex geesood ah,lamana yaqaan sababta ay xukuumada Soomaaliya u diiday in ay ka qeybgasho kulankaas.
Hase ahaatee is afgaranwaa ka soo ifbaxay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa laga yaabaa in dowlada Kenya ay heshiis la gaarto maamulka Jubba ee uu hogaamiyo Axmed Madoobe.
Wararka ayaa sheegaya in dowlada Kenya oo hore qunsul ugu magacawday magaalada Kismayo ay dhici karto in ay gorgortan la gasho Axmed Madoobe marka ay gacanta ku soo dhigto lacagta ay dooneyso in ay ka hesho hay’adaha gargaarka.
Dowlada Kenya ayaa beesha caalamka ka dooneysa sidii loogaga taageeri lahaa hirgelinta heshiiska saddex geesoodka ah ee aan haysan wax taageero ah, iyadoo heshiiskaasna ay dowlada Soomaaliya ka caga jiideyso.
Sida ay wararku sheegayaan dowlada Kenya ayaa la rajeynayaa in ay soo bandhigto sida ay uga xun tahay in dowlada Soomaaliya ay gacan ka geysato dib u celinta qaxootiga.
Kulanka ka dhacaya dalka Ethiopia ayaa waxaa ka qeybgali doonaa madaxa Hay’ada Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga Antonio Guterres iyo wakiilo ka socda hay’adaha gargaarka.
Heshiis ay la saxiixay Novembertii hore kaasoo isu keenay dowlada Kenya,Somaliya iyo UNHCR ayaa ahaa mid la isku afgartay in dib loogu celiyo dalka Soomaaliya qaxootiga tiradoodu gaareyso nus malyuun Soomaali ah kuwaasoo ku jira xeryo ku yaal dalka Kenya.